झटारो: शपथ संवाद - व्यंग्य - प्रकाशितः माघ १४, २०७४ - नेपाल
झटारो: शपथ संवाद
शपथ खाने, शपथ खाने भन्छन्, के रहेछ यो शपथ खाने भनेको ? मलाई सधैँ अचम्म लागिरहन्थ्यो । यसपालि पनि प्रदेशसभाका सांसदहरूले शपथ खाएको नियालेर हेरियो, टेलिभिजनमा । जति नै ध्यान दिएर हेर्दा पनि शपथ खानेहरूले कुनै चीज खाएको भने देखिएन । अचम्म लागेर मैले एक पुराना अनुभवी र हालै प्रदेशसभामा निर्वाचित भएर शपथ खाइसकेका माननीय सांसदज्यूलाई डराइडराइ सोधेँ, ‘हे माननीय महोदय ! हजुरले त यस्ता शपथ कति खानुभयो कति ! तर, मलाई सधैँ एउटा जिज्ञासा मनमा लागिरहन्छ, यो शपथ खाँदा खासमा हजुरहरू के खानुहुन्छ ? काँक्रो खाएजस्तो मरङमरङ चपाएको पनि देखिँदैन, भात खाएजस्तो सप्रङसप्रङ पनि सुनिँदैन । जुस पिएजस्तो घुटुकघुटुक पनि छैन, चुइगम चपाएजस्तो मच्याकमच्याक पनि छैन । तापनि, यसलाई शपथ खाने भन्नुहुन्छ । यसको अर्थ के हो माननीय महोदय ? कृपा गरी यो अज्ञानीलाई बेलिबिस्तार लगाइदिनुहोस् ।’
‘अर्को कुरा सुन, शपथ खाँदा केही पनि खाएको देखिँदैन भनेर तिमीले जो भन्यौ, त्यो सरासर गलत हो । शपथ खाएका बेला ध्यान दिएर हेर्‍यौ भने सबैले केही न केही निलिरहेको तिमीले प्रस्ट देख्नेछौ । वास्तवमा शपथ खाएका बेला हामीहरू घुटुकघुटुक थुक निलिरहेका हुन्छौँ । त्यसैले शपथलाई खानेकुराको वर्गमा राखिएको हो । च्यापु नचलाए पनि यसमा निल्ने कार्य अनिवार्य हुन्छ । रुद्रघन्टी तलमाथि गरेकै हुन्छ ।’